နှုတ်ခမ်းကင်ဆာရဲ့ ပထမဦးဆုံးလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ? - Lifestyle Myanmar
နှုတ်ခမ်းကင်ဆာဆိုတာ ခံတွင်းကင်ဆာအမျိုးအစား အများစုထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်တွေ ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်အောင် ကြီးထွားလာရာကနေ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အသားလုံး၊ အနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ဒီရောဂါက ဆေးရွက်ကြီး ၊စီးကရက်သောက်သုံးသူတွေ၊ Lip protection အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရောင်ခြည်အောက်မှာ အချိန်အများကြီး နေရတဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းကင်ဆာကို စောစောသိရှိပါက ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်။ သင့်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အဖုအကျိတ်တွေ၊ အနာတွေကို ဘယ်တော့မှ လျစ်လျူမရှုပါနဲ့။
နှုတ်ခမ်းကင်ဆာရဲ့ ပထမဆုံးလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?
ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာအများစုတွေက ခံတွင်းမှာ ပျောက်မသွားသော အနာ၊ အဖု၊ ရည်ကြည်ပု၊(သို့) အသားလုံးတွေရှိနေတာ၊ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အနီ(သို့) အဖြူရောင် အကွက်တွေပေါ်နေတာ၊ နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင်သွေးထွက်နေခြင်း(သို့)နာကျင်ခြင်း ၊မေးရိုးရောင်ရမ်းခြင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်း ပြသင့်တဲ့ နှုတ်ခမ်းကင်ဆာရဲ့ အစောပိုင်းလက္ခဏာ တချို့ပါ။
နှုတ်ခမ်းကင်ဆာက အများအားဖြင့် ပါးစပ်၊ ပါး၊ လျှာနှင့် လည်ချောင်းကို ဖုံးအုပ်ထားသော Squamous ဆဲလ်လို့ခေါ်တဲ့ ပါးလွှာတဲ့အရေပြားဆဲလ်တွေနှင့်အတူ စတင်ပါတယ်။ ကင်ဆာကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ နှုတ်ခမ်းတွေရဲ့ နက်ရှိုင်းသော ဧရိယာတွေအထဲသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ အစောပိုင်းလက္ခဏာတစ်ခုက နှုတ်ခမ်းအသားပပ်သလို ယားယံလာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်၊ အရက်သောက်သူတွေ၊ အယ်ကိုဟောပါတဲ့ ခံတွင်းသန့်စင်ဆေးသုံးသူတွေ သို့မဟုတ် အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ရသူတွေဟာ အောက်နှုတ်ခမ်း သို့မဟုတ် အပေါ်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ ယားယံတယ်လို့ သံသယရှိရင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
၂။ နှုတ်ခမ်းတွေပေါ်မှာ အနာပေါက်ခြင်း
နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အနာရှိလျှင်၊ တစ်ပတ်/နှစ်ပတ်ကြာလို့မှ သူ့ဘာသာ မပျောက်လျှင် ကင်ဆာရဲ့အစောပိုင်းလက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနာက ထုံနေတာ သို့မဟုတ် နာကျင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပြီး သွေးအလွန်အကျွံထွက်တာ၊ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ ခြောက်သွေ့ပြီးအဖက်ဖက်တွေ ကွာနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်နှုတ်ခမ်းကို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အနာတွေ၊ အသားလုံးတွေ ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။
၃။ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အသားပို/အကျိတ်များ
နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ ထုံနေ/နာကျင်နေတဲ့ အသားပို/အကျိတ်တွေ ရှိပါက၊ တစ်ပတ်- နှစ်ပတ်ကြာလို့ မပျောက်ပါက ဆရာဝန်နဲ့ စစ်ဆေးရပါမယ်။
၄။ နာကျင်မှု သို့ ထုံကျင်နေတာ
နှုတ်ခမ်းကင်ဆာက ဘာအကျိတ်လက္ခဏာမှ မပြဘဲ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ နာကျင်တာ၊ ထုံနေတာအဖြစ် ပထမဆုံးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ မေးရိုး သို့မဟုတ် လည်ပင်းရဲ့ lymph nodesထဲမှာ ရောင်ရမ်း၊ နာကျင်ခြင်းက ကင်ဆာပြန့်ပွားမှုကို ညွှန်ပြနေတဲ့ အရိပ်အယောင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။